Goolama Xaaliyaanii: Pirezidaantichi erga kaadhimamtootatti karaa waan cufanii booda himanni irratti akka dhiyaatu gaafatan - BBC News Afaan Oromoo
Goolama Xaaliyaanii: Pirezidaantichi erga kaadhimamtootatti karaa waan cufanii booda himanni irratti akka dhiyaatu gaafatan
Pirezidaanti Sarjoo Matareellaan yaada Ministira Maallaqaa irraan kan hafe wiixineen biroo simataniiru
Dursaan paartii siyaasaa guddicha Xaaliyaanii 'Five Star' jedhamuu Luigi Di Maio pirezidaantiin biyyattii Sarjoo Matareellaan erga ministira maallaqaa carraa dhowwatanii aangoo isaaniirraa buqqa'uu akka qaban waamicha dhiyeessan.
Pirezidaanti Sarjoo Matareellaan caasaa mootummaa keessatti goolii uumaa jiru ittiin jedhan Luigi Di Maio.
Yaadi mootummaa jabaa tokko uumuu kan Ministira Muummee biyyattii Giuseppe Conte'n dhiyaate wayita pirezidaantichi kaadhimaa paartii Pawuloo Savoonaarraan hacuuccaa geessisan kufeera.
Paartiin Five Star jedhamu mootummaa kooluu bal'ifate kan hunda of jalatti hammatu ijaaruu barbaada.
Filannoo Bitootessa darbeerratti paartiin mo'iinsa argate waan hin turreef,ergasii Xaaliyaaniin mootummaa jabaa tokko malee jirti.
Giuseppe Conte'n amma aangoorraa bu'aniiru, kanaaf Pirezidaanti Matareellaan nama ministira muummee ta'uu danda'u jechuun ogeessa diinagdee Dhaabbata Maallaqaa Idi-addunyaa duraanii Carlo Cottarelli waliin marii eegalaniiru.
Yeroo ammaa goolamni caasaalee mootummaa Xaaliyaanii keessatti mudateera jedhan Luigi Di Maio
Gabaasaan BBC James Reynolds magaalaa Room irraa akka gabaasetti garuu haala kanaan sirna bulchiinsaa fi hojiilee biroo mijeessuun waan hin yaadamneef gamanumaa filannoo haaraa geggeessuuf haalli mijachuu qaba jedha.
Amma mormiin pirezidaantii fi hawaasa bal'aa gidduutti jabaachaa waan jiruuf, bakka Itaaliin Gamtaa Awurooppaa keessatti qabdurrattillee dhiibbaa qabaata jedheera.